မြန်မာ့အင်တာနတ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ ဖြတ်သန်းကြည့်ခြင်း | kothihaoo
HomeAboutweb sites များ
သိထားရမယ့် နျူကလီးယားဓါတ်ရောင်ခြည်၏ ဆိုးကျိုးများ	မိုးနက်ဝမ်း (MoeNed-One) ယူနီကုဒ် အောင်မြင်စွာ တီထွင်	မြန်မာ့အင်တာနတ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ ဖြတ်သန်းကြည့်ခြင်း	April 2, 2011	kothihaoo	အင်တာနက်	Leaveacomment	ခက်တယ်
မလုပ်ရဘူးပြောရင်အားကြီးလုပ်ချင်တာ သီဟတို့ပဲ အကျင့်မကောင်းတာလားမသိ…
ပထမဦးစွာ ချောင်းကြည့်ပေါက်ဖောက်တာပေါ့ —-https://www.polysolve.com/ —–ကို browser ရဲ့ address bar မှာ ရိုက်ထည့်ပါတယ်..
အဲ…ကြော်ငြာကြီးပါလားဆိုပြီးစိတ်မပျက်သွားပါနဲ့…အဲဒီကြော်ငြာညာဘက်အပေါ်ထောင့်က X လေးကို နှိတ်-ပိတ်သွားရော…
ဒီလို proxy site တွေကိုသုံးပြီးကြည့်တဲ့အခါ စိတ်ညစ်ရတာက ခဏခဏ pop up လို့ခေါ်သော ကြော်ငြာများ တက်လာတတ်တာပါ
သို့သော် သည်းညည်းခံပါ…သူက ကိုယ်သွားချင်သောနေရာကို ပို့ပေးနေတာကိုး…
လေရှည်တယ်ဆိုပြီး မပြောနဲ့လေ..မသိသူများအတွက်ကတော့ ဗဟုသုတ ရပါတယ်…ကိုယ်လဲ ဒီလိုပဲ လိုက်ယူရသူဆိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာတာလဲပါတာပါ။
အဲဒီကြော်ငြာကို ပိတ်ပြီး သူ့ website က search box မှာပဲ မိမိ သွားလိုသော address ကို အပြည့်အစုံ (ဥပမာ google web page ကို သွားချင်ရင် http://www.google.com ) ကိုရိုက်ထည့်ကာ being solve ဆိုသော box လေးကို click လိုက်ပါက ရပါပြီခင်ဗျ…. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချောင်းကြည့်ပေါက်လေး…
သိထားရမယ့် နျူကလီးယားဓါတ်ရောင်ခြည်၏ ဆိုးကျိုးများ	မိုးနက်ဝမ်း (MoeNed-One) ယူနီကုဒ် အောင်မြင်စွာ တီထွင်	မြတ်စွာဘုရားအား ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏
ြ​မင်မိ၊ြ​ကား​မိ၊ ဖတ်မိ​သမျှ	ြ​မင်မိ၊ြ​ကား​မိ၊ ဖတ်မိ​သမျှ
ဒေါက်တာလွမ်းဆွေ ဘလော့An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. ငွေကြေးဈေးကွက်An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. နည်းပညာဘလော့An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. နည်းပညာဘလော့များAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.Twitter Updates
RT @Studentscode: [S]inging, [T]weeting
[Y]awning2years ago
RT @spillitdotme: What do they like about you? Let your friends and family #spillit at spillit.me2years ago
RT @AttivoUK: Are you interested in Fire Alarm Detectors, Panels & Accessories at competitive prices, why not contact us foraquote? #stay…2years ago
RT @fadm_ru: Russian Startup Tour - в Ульяновске. Заявки на участие в питч-сессиях подали 92 ульяновских стартапа, для выступления отобраны…2years ago
RT @Reality_of_Idea: twitpic.com/85jow6 RT @flolenator touch without grasping.behold without possessing.devote without bequeathing.take…2years ago